मङ्गलबार ४ जेष्ठ, २०७३
भूकम्पका कारण बुबाको निधन भयो। एकातिर उहाँको निधनको पीडा अर्कोतिर लुक्लाकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो खाद्यान्न पसल तथा काठमाडौंको कार्गो कम्पनी र अरु कामकाज सम्हाल्नुपर्ने अवस्था। बुबाको विधिगत काजकिरिया सकेपछि हामी ४ बहिनी र १ भाइ बसी 'अब के गर्ने'…
सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा बढी रकम थुपार्नमा इतिहास रचेको छ। अहिले(वैशाखसम्म) सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई सरकारले 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरेको थियो, तर यसै आव बजेट खर्च कम हुने वर्षका रूपमा…
जबजब संकट पर्छ मानिस अनायास भन्न थाल्छन्– 'मदन भण्डारी भएका भए...।' २३ वर्षअघि पत्याउनै नसकिने रहस्यमय सवारी दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका भण्डारीले लामो सार्वजनिक जीवन बिताउन पाउनुभएन। भूमिगत जीवन त्यागेर ०४७ सालको मध्यतिर सार्वजनिक भएका उहाँ साढे दुई वर्षमै ०५०…
संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ। विगतका सरकारले झैँ यो पटक पनि सरकारले विभिन्न नाराका साथ अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ। संसदीय व्यवस्थाको गुण र दोषको रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारमा सामेल दलहरूले निकै प्रशंसा गरे।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विविध कारण देखाउँदै सरकारको वार्ता आह्वान इन्कार गरेको छ। सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरेको ४ दिनपछि बिहीबार मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'वार्ताको वातावरण नबनेको' जिकिर गर्दै असहमति जनाएको हो।
पीडित रुवाएर शान्ति
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिले सिर्जना गरेको जटिल अवस्थातर्फ मुलुक गइरहेको छ। तत्कालका लागि ओलीको सत्ता जोगियो तर यसले छाड्ने दुष्परिणाम मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
मधेसी नेतामा सोचको अभाव
जन्मभूमि र स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। हामी जुन जमिन र समाजमा जन्म लिन्छौँ, त्यसका लागि के गर्छौं? त्यस जन्मभूमिप्रति कस्तो व्यवहार गर्छौं? हाम्रो कर्तव्यनिष्ठाको झलक हाम्रो दैनिक व्यवहारमा झल्कनुपर्छ। स्वर्गभन्दा प्यारो जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध सबैमा हुनुपर्छ।